H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) => ? | Chemical Equation Balancer
H2O2 =? | ဓာတုညီမျှခြင်း Balancer
87 ရလဒ်များ တွေ့ရှိရ
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ခဲ (ii) sulfide ရေ CI77630; အင်္ဂလီဆစ်; အဖြူ နို့ဖြူ; CIPigment ဖြူ 3; sulfuric acid ခဲ (၂)၊ Plumbous sulfate; ခဲ (၂) ဆာလဖိတ်၊ Freemans ဖြူခဲ၊ NA-2291; ခဲအောက်ခြေ; Mulhouse White; sulfuric acid ခဲ (၂) ဆား၊ ထောင့်ချိုး
(လန်) (rn) (လန်) (kt)
(khôngmàu) (အဲ) (khôngmàu) (စကား)
ညီမျှခြင်း 4H ၏ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ2O2 + PbS → 4H2O + PbSO4
H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) ၏ PbS (ခဲ(ii) sulfide) နှင့် ဓာတ်ပြုသည့်အခြေအနေကား အဘယ်နည်း။
H2O (ရေ) နှင့် PbSO4 (CI77630; Anglislite; Fast White; Milk White; CIPigment White 3; Sulfuric acid lead(II) Plumbous sulfate၊ Lead(II) sulfate၊ Freemans White Lead၊ NA-2291 နှင့် တုံ့ပြန်မှုများ မည်သို့ဖြစ်ပွားပြီး တုံ့ပြန်မှုများ မည်သို့ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း ခဲအောက်ခြေများ၊ Mulhouse အဖြူရောင်၊ ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်ခဲ(II) ဆား၊ Anglesite) ?
PbS H2O2 နှင့်ဓာတ်ပြုပါသည်
H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) ပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်သည် PbS (ခဲ(ii) sulfide) နှင့် ဓာတ်ပြုသည်။
ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ 4H နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်မေးခွန်းများ2O2 + PbS → 4H2O + PbSO4
ဓာတ်ပြုနိုင်သော PbS (ခဲ(ii) sulfide) နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ
PbS (ခဲ(ii) sulfide) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ PbS (ခဲ(ii) sulfide) ဓာတ်ပြုမှုအဖြစ် PbS (ခဲ(ii) sulfide) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
H2O (ခဲ(ii) sulfide) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် H2O (ရေ) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် PbSO4 (CI77630; Anglislite; အမြန်အဖြူ၊ နို့အဖြူ၊ CIPigment White 3၊ Sulfuric acid lead(II); Plumbous sulfate; Lead(II) sulfate; Freemans White Lead; NA-2291၊ Lead Bottoms; Mulhouse White; ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်ခဲ(II) ဆား၊ ထောင့်ဆိုဒ်)
PbSO4 (ခဲ(ii) sulfide) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ PbSO4 (CI77630; Anglislite; Fast White; Milk White; CIPigment White 3; Sulfuric acid lead(II); Plumbous sulfate; Lead(II) sulfate၊ Freemans White Lead; NA-2291၊ Lead Bottoms ပါ၀င်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။ Mulhouse White; Sulfuric acid lead(II) salt; Anglesite) ထုတ်ကုန်အဖြစ်?
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် မန်းဂနိစ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ရေ အောက်စီဂျင် မန်းဂနိစ် (၂) အောက်ဆိုဒ်၊ မန်းဂနိစ် monoxide; မန်းဂနိစ်အောက်ဆိုဒ်၊ မန်းဂိုးစီစီ; CI77726; အစိမ်းရောင် Cassel၊ မန်းဂနိစ်အစိမ်း၊ နူမနီနီး; Rosenstiehl အစိမ်းရောင်
(လန်) (rn) (လန်) (khi) (rn)
(khôngmàu) (nâuđen) (khôngmàu) (khôngmàu) (xanh lácây)
1 1 1 1 1 Hệsố
H ညီမျှခြင်းအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များ2O2 + MnO2 →အိပ်ခ်ျဒီ2O + O2 + MnO
H2O (ရေ) နှင့် O2 (အောက်ဆီဂျင်) နှင့် MnO (Manganese(II) အောက်ဆိုဒ်၊ မန်ဂနိစ်မိုနောက်ဆိုဒ်၊ မန်ဂနိုက်အောက်ဆိုဒ်၊ Manganosite၊ CI77726၊ Cassel Green၊ Manganese Green၊ Nu-Manese၊ Rosenstiehl Green) မည်ကဲ့သို့ တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီး တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သနည်း။
ဤကိစ္စတွင်, သင်ရုံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိမရှိကြည့်ရှုရန်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် MnO (မန်းဂနိစ် (၂) အောက်ဆိုဒ်၊ မန်းဂနိစ်မိုနောက်ဆိုဒ်၊ မန်းဂနိစ်အောက်ဆိုဒ်၊ မန်းဂို့စီတီ; CI77726; ကဲစိမ်းအစိမ်း၊ မန်းဂနိစ်အစိမ်း၊ နူမနိစ်၊ ရိုဆန်စတီလ်အစိမ်းရောင်) တုံ့ပြန်မှုအဆုံးမှာပေါ်လာပါသည်။
ဓာတုတုံ့ပြန်မှု H2O2 + MnO2 →အိပ်ခ်ျဒီ2O + O2 + MnO
H2O (မန်းဂနိစ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် H2O (ရေ) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ကုန်ပစ္စည်း MnO (Manganese(II) အောက်ဆိုဒ်၊ မန်ဂနိစ်မိုနောက်ဆိုဒ်၊ မန်ဂနွတ်အောက်ဆိုဒ်၊ မန်ဂနိုဆိုဒ်၊ CI77726၊ Cassel Green၊ Manganese Green၊ Nu-Manese၊ Rosenstiehl Green) နှင့် သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများ
MnO (မန်းဂနိစ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် MnO (Manganese(II) အောက်ဆိုဒ်၊ မန်ဂနိစ်မိုနောက်ဆိုဒ်၊ မန်ဂနွတ်အောက်ဆိုဒ်၊ Manganosite၊ CI77726၊ Cassel Green၊ Manganese Green၊ Nu-Manese၊ Rosenstiehl Green) ပါရှိသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
2FeCl2 + H2O2 + 2HCl ဖြစ်သည် → H2O + 2FeCl3
သံ (ii) ကလိုရိုက် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက် ရေ သံကလိုရိုက်
(နောက်ချေး) (လန်) (နောက်ချေး) (လန်) (နောက်ချေး)
(lụcnhạt) (khôngmàu) (khôngmàu) (khôngmàu) (vângnâu)
2 1212Hệsố
2FeCl ညီမျှခြင်းအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များ2 + H2O2 + 2HCl → H2O + 2FeCl3
FeCl2 (သံ(ii) ကလိုရိုက်) ၏ တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေသည် H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး HCl (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်) နှင့် ဓာတ်ပြုသည်။
H2O (ရေ) နှင့် FeCl3 (iron chloride) ကို မည်သို့ တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
FeCl2 သည် HCl ရှိ H2O2 နှင့်ဓာတ်ပြုပါသည်
FeCl2 (သံ(ii) ကလိုရိုက်) သည် H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်သည် HCl (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်) နှင့် ဓာတ်ပြုသည်။
ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ 2FeCl နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်မေးခွန်းများ2 + H2O2 + 2HCl → H2O + 2FeCl3
ဓာတ်ပြုနိုင်သော FeCl2 (သံ(ii) ကလိုရိုက်) နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
FeCl2 (သံ(ii) ကလိုရိုက်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ FeCl2 (သံ(ii) ကလိုရိုက်) ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ဓာတ်ပြုနိုင်သော HCl (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်) နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
HCl (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ HCl (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်) ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
H2O (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် H2O (ရေ) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် FeCl3 (သံကလိုရိုက်) နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
FeCl3 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ FeCl3 (သံကလိုရိုက်) ပါ၀င်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
H2O2 + ၆ နာအိုဟ + 2CoCl2.6H2O → 12H2O + 4NaCl + 2Co (OH)3
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် ကိုဘော့ (II) ကလိုရိုက် hexahydrate; ကိုဘော့ (II) dichloride 6hydrate ရေ ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက် ကိုဘော့ (III) trihydroxide
(လန်) (ရက်) (rn) (rn) (kt)
(khôngmàu) (khôngmàu) (စကား) (အဲ)
142 1242 Hệsố
H ညီမျှခြင်းအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များ2O2 + ၆ နာအိုဟ + 2CoCl2.6H2O → 12H2O + 4NaCl + 2Co (OH)3
H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) သည် NaOH (ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိတ်) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး CoCl2.6H2O (Cobalt(II) chloride hexahydrate; Cobalt(II) dichloride 6hydrate) နှင့် ဓာတ်ပြုသည် ။
H2O (ရေ) နှင့် NaCl (ဆိုဒီယမ် ကလိုရိုက်) နှင့် Co(OH)3 (Cobalt(III) trihydroxide) ကို မည်သို့ တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
CoCl2 သည် H2O2 နှင့် alkaline environment တွင်ဓါတ်ပြုပါသည်
H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) ပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်သည် NaOH (ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိတ်) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး CoCl2.6H2O (Cobalt(II) chloride hexahydrate၊ Cobalt(II) dichloride 6hydrate) နှင့် ဓာတ်ပြုပါသည်။
ဓာတုတုံ့ပြန်မှု H2O2 + ၆ နာအိုဟ + 2CoCl2.6H2O → 12H2O + 4NaCl + 2Co (OH)3
NaOH (ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်) ဓာတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများ
NaOH (ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိတ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ NaOH (ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်) ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
Reactant CoCl2.6H2O (Cobalt(II) chloride hexahydrate၊ Cobalt(II) dichloride 6hydrate) နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ
CoCl2.6H2O (Cobalt(II) chloride hexahydrate; Cobalt(II) dichloride 6hydrate) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ CoCl2.6H2O (Cobalt(II) chloride hexahydrate; Cobalt(II) dichloride 6hydrate) ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
H2O (Cobalt(II) chloride hexahydrate; Cobalt(II) dichloride 6hydrate) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် H2O (ရေ) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် NaCl (ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်) နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ
NaCl (Cobalt(II) chloride hexahydrate; Cobalt(II) dichloride 6hydrate) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် NaCl (ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်) ပါရှိသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် Co(OH)3 (Cobalt(III) trihydroxide) နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
Co(OH)3 (Cobalt(II) chloride hexahydrate; Cobalt(II) dichloride 6hydrate) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ Co(OH)3 (Cobalt(III) trihydroxide) ပါ၀င်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
၁၀ Fe + 3H2O2 → 2Fe (OH)3
(Run) (လန်) (kếttủa)
(tr xng xám) (khôngmàu) (vângnâu)
232 Hệsố
2Fe ညီမျှခြင်းအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များ + 3H2O2 → 2Fe(OH)3
What is reaction condition of Fe (iron) reacts with H2O2 (hydrogen peroxide) ?
Fe(OH)3() ကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလဲ။
Phenomenon after Fe (iron) reacts with H2O2 (hydrogen peroxide)
ဓာတုတုံ့ပြန်မှု 2Fe နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်မေးခွန်းများ + 3H2O2 → 2Fe(OH)3
ကုန်ပစ္စည်း Fe(OH)3 () နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
What are the chemical and physical characteristic of Fe(OH)3 (hydrogen peroxide)? ထုတ်ကုန်အဖြစ် Fe(OH)3() ပါရှိသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။